Microsoft ayaa Shaacisay Helitaanka Guud ee Azure Sphere | Laga soo bilaabo Linux
Microsoft waxay shaacisay helitaanka guud ee Azure Sphere, oo ay macaamiisha xaqa u lihi iska diiwaan gelin doonaan maalmaha soo socda. Diiwaangelinta waxaa ka mid ah helitaanka dhammaan qaybaha Sphere, iyo sidoo kale cusbooneysiinta nidaamka qalliinka nolosha.
Azure Sphere waa madal SaaS ah heer sare leh oo leh awood isgaarsiineed oo ku dhisan qalabka IoT-warshadaha iskutallaabta. Waxaa ku jira qalab isku dhafan oo lagu dhisay hareeraha silikoon Hubaal. Azure Sphere, oo ah nidaam hawlgal ku salaysan Linux ku shaqeeya, iyo Azure Sphere Security Service, oo ah adeeg daruur ku salaysan oo bixiya nabadgelyo joogto ah.
1 Ku saabsan Azure Sphere
Ku saabsan Azure Sphere
Azure Sphere waxay ku shaqaysaa jajabyo la xaqiijiyay oo Azure Sphere ah waxayna ku xiran tahay adeegga amniga Azure Sphere waxaana loogu talagalay inay bixiso barxad lagu horumariyo barnaamijyada IoT.
Kani waa nidaamkii ugu horreeyay ee hawl gala ee keena kernel Linux ah Nidaamka labaad ee Unix-ka ee u shaqeeya Microsoft ayaa si cad u sii daayay, xiise, kan kale waa Xenix, tobaneeyo sano jir oo laga tagay.
Maanta Azure Sphere, Xalka amniga isku dhafan ee Microsoft ee qalabka iyo qalabka IoT ayaa diyaar u ah horumarinta iyo dejinta qalab aamin ah oo isku xiran. Taariikhda Helitaanka Guud ee 'Azure Sphere' ma noqon karto mid waqtigeeda ka badan.
Chips iyo qalabka Azure Sphere waa la xaqiijiyay Waxay taageeraan laba fulin: greenfield iyo brownfield.
Greenfield waxay ku lug leedahay naqshadeynta iyo dhismaha qalabka IoT oo leh jajab la jaan qaada oo la soo saaray ama ugu dhakhsaha badan oo ay soo saari doonaan MediaTek, NXP iyo Qualcomm.
Ku saabsan qaabeynta brownfield, waxay u baahan tahay qalab "ilaaliye" Azure Sphere ah, badankood waxaa soo saaray Avnet iyo AI-Link, si loogu xiro qalabka jira internetka.
Qalabka Azure Sphere waxaa lagu heli karaa qaabab badanoo ay ku jiraan qaybaha Wi-Fi, xirmooyinka horumarinta, iyo looxyada horumarinta (oo ka socda iskaashatooyinka sida Studios Seeed iyo USI). Kahadalkeeda, moduleka Guardian, oo aan si toos ah ugu xirnayn shabakadaha, waa aalad leh gundhig la aqoonsan yahay oo Azure Sphere ah oo shaqeynaya nidaamka hawlgalka Azure Sphere iyo adeegga amniga Azure Sphere, oo labadaba loo qaabeyn karo iyada oo loo marayo xiriirka Wi-Fi ama Ethernet.
The MediaTek MT3620, oo ah kii ugu horreeyay ee Sphere, waxaa ka mid ah nidaam hoosaad amni oo Microsoft ay ugu magac dartay Pluto.
Microsoft ayaa sanadkii hore shaacisay inay la shaqeyn doonto NXP qalab kale oo la aqoonsan yahay oo Azure Sphere ah, i.MX 8, kaas oo la jaan qaadi doona caqliga macmalka ah, iyo sawirada hodanka ah iyo khibradaha isticmaalaha isticmaalaha. Microsoft sidoo kale waxay la shaqeyneysaa Qualcomm casharkii ugu horreeyay ee la aqoonsan yahay ee 'Azure Sphere', kaas oo bixin doona isku xirnaan sugan.
Saraakiisha Microsoft ayaa sheegay in macaamiisha horay u isticmaalay Azure Sphere ay u adeegsadeen naqshadeynta iyo soo saarista aaladaha macaamiisha iyo qalabka warshadaha.
Chips-ka shahaado haysta ee 'MediaTek MT3620' ayaa sidoo kale loo adeegsadaa qaybaha amniga si ammaan ah loogu xiro loona ilaaliyo qalabka muhiimka ah, ayay masuuliyiintu sheegeen.
Horumarinta codsiyada Azure Sphere OS waa mid fudud. Isticmaalka Azure Sphere SDK ee Linux ama Windows iyo shaybaarka il furan iyo xalalka GitHub, horumariyayaashu waxay geyn karaan codsiyada adeegsada aaladaha Azure Sphere chips la aqoonsan yahay. Codsiyada la isweydiinayo waxay ku shaqeeyaan processor-weyn oo marin u leh shabakad dibadeed.
Sidoo kale, sida Microsoft u sharraxday Noofambartii hore:
“Horumariyayaashu waxay u baahan yihiin qalab casri ah sida waaya-aragnimada ay higsanayaan. Bishii Sebtember 2018, waxaan sii deynay horudhacayaga SDK ee Visual Studio. Tan iyo waagaas, waxaan sii wadey inaan si deg deg ah u socodsiino, taasoo sahleysa in la horumariyo, la geeyo, lana khaldo codsiyada Azure Sphere. Waxaan sidoo kale soo saarnay shaybaarro iyo xalal ku saabsan GitHub, annagoo siinayna horumariyeyaasha qalab fudud oo si fudud loo isticmaali karo. Iyo, sidaan dhowaan ka wada hadalnay, waxaan yeelan doonnaa Linux SDK iyo taageeridda koodhka Visual Studio dhowaan.
Dabcan, horumarku kuma koobna Azure. Chips-yada waxay la shaqeeyaan deegaanno kale oo dadweyne, gaar loo leeyahay iyo daruuro isku dhafan, oo ay ku jiraan Adeegyada Websaydhka Amazon iyo Google Cloud, kuwaas oo shaki la’aan ka guuleystay kuwii hore ee isticmaalayaasha Azure Sphere.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » Microsoft waxay shaacisay helitaanka guud ee Azure Sphere